Xage maraya Shirkii Madaxda Somalia uga socday Emaaraadka | Kismaayo24 News Agency
Xage maraya Shirkii Madaxda Somalia uga socday Emaaraadka
Tuesday November 1, 2016 - 4:39 under Somali News by admin
Imaaraadka Carabt ayaa Madaxda Maamul Goboleedyada Soomaaliya kula heshiiyay magacyada liis ay ka buuxan siyaasiyiin caan ah inaan soo gelin Baarlamaanka isla markaana lala dagaalamo sidii xubnahaas Baarlamaanka loogu diidi lahaa.
Qorshahan Imaaraadka Carabta ayaa waxaa uu yahay in Baarlamaanka laga reebo xubno ay ka mid yihiin Faarax Sheekh C/qaadir, Wasiirka Arrimaha Gudaha Odowaa, Mahad Salaad, Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada oo dhinac ah iyo magacyo kale oo aanu helin.
Waxaa kaloo liiska ku jira xubno Imaaraadka Carabta u arkaan inay ku xiran yihiin Turkiga waxaana ka mid ah Wasiirka Iskaashiga Caalamiga C/raxmaan Ceynte, Xasan Macalin oo kooxda Aala Sheekh ka tirsan, Cabdikariin Xaashi iyo xubno kale.
Imaaradka Carabta ayaa aad uga xumaaday in aqalka sare soo galo Mr Abshir Bukhaari iyagoo u arkayay inuu yahay nin ku xiran turiga.
Maamul Goboleed kasta waxaa lagula heshiiyay in aan baarlamaanka loo ogolaanin in wax ku xiran kooxaha raggaas ka kala tirsan yihiin.
Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada ayaa ballan qaaday laakiin waxaa la is weydiinaya sida ay heshiiskan u dhaqan gelin karaan.
Imaaraadka Carabta waxay dagaal kula jiraan Siyaasiyiinta oo ku kala xiran kooxo iyo kuwa ku xiran dowladda Turkiga.
Kulankii dhacay shalay oo Isniin ahayd ayaa Madaxda Maamul Goboleedyada miiska loo soo saaray labo xubnood oo Imaaraadka u soo sharaxan jagada Madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland C/weli Gaas iyo Madaxweynaha Jubuland waxay taageeran Cumar C/rashiid oo danaha Imaaradka ka leeyahay shidaalka laga baaraya badda ay isku haystaan kenya iyo soomaaliya u arkaan qofka keliya fulin kara.
Cabdikariin Guuleed Madaxweynaha Galmudug iyo Madaxweynaha Hirshabeele Cali C/llaahi Cosoble waxay soo jeediyan in C/raxmaan Cabdishakuur oo ah ninkii saxiixay heshiiska loo bixiyay is fahamka muranka badda kenya iyo soomaaliya.
Dooda markii halkaas maraysay ayaa Shariif Xasan Sheekh Aadan Madaxweynaha koonfurgalbeed waxaa uu yiri meeshan aniga ayaa jooga waa in la i dhisaa , aniga ayaa diyaar u ah jagada Madaxweynaha qof kalena ma dhisayo.
Hadaba iyadoo waxba lagu heshiin ayaa la kala seexday waxaana la balamay maanta oo talaado ah.
Safiirka Imaaradka Carabta u fadhiya Dalka Soomaaliya Amb Mohamed Al-Cusmani
Safiirka Imaaradka Carabta u fadhiya Dalka Soomaaliya Amb Mohamed Al-Cusmani oo garwadeen ka ah shirkan ka socda dalkiisa ayaa loo arkaa ninka qaska ugu weyn ku haaya soomaaliya.
Danta uu leeyahay oo keliya ayaa ah shidaalka laga baarayo badda ay isku haystaan kenya iyo soomaaliya, waxayna imaaradka baaristaas ka helayaan lacag fara badan gaar ahaan shirkadda ENE oo Imaaradka laga leeyahay.
Imaaradka Carabta ayaa waxay doonayan inay hogaanka soomaaliya u dhiiban ragg iyaga u shaqeeya kana shaqeeya danahooda keliya.